जनतामारा सरकार ! - Jagaran Post
Jagaran Post २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०४:५३
राणाकालमा नेपाली नागरिक स्वतन्त्र भएर बांच्न पाएनन, स्वतन्त्रतापश्चात नेपाली नागरिकले सुख पाएर बाँच्न पाएनन। त्यसपश्चातका सरकार सबै जनतामारा सरकार !
हामीले बारम्बार उठाऊँदै आएको मुद्दा पनि यहिं नै हो – नागरिकलाई सुखसंग बाँच्न देऊ।
समय बदलियो, ब्यवस्था बदलियो तर नागरिकका दुखका पहाड भने कहिल्ल्यै घटेनन। झनपछि झन चुलिंदै गए, छिमल्नै नसकिने गरि।
यौटा सामान्य नागरिक हरियो पासपोर्ट बोकेर देशबिदेश भौतारिन्छ, ५०/६० हजारको जागिर खान्छ। भएभरको उर्जा सिप र यौवन बिदेशमा पोखेर स्वदेश फर्किंदा उसंग न यौटा बस्ने घरको जोहो हुन्छ, न नै उसका सपनाहरु पूरा भएका हुन्छन।
तर, त्यहिं ५०/६० हजारको सरकारी जागिर खानेले एक डेढ बर्षमैं शहरमा भव्य महल ठड्याईसकेको हुन्छ। मीठो खान्छ, चिल्लो कार चढ्दछ, छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा पढाऊँदछ। समग्रमा उसको जिन्दगी उच्च घरानामा उक्लिईसकेको हुन्छ।
यो त भयो यौटा सामान्य नागरिकको कुरा। जसमध्ये यौटाले हरियो पासपोर्ट बोकेर अनेकन समस्यासंग जुध्दै बिदेश हानियो भने अर्कोले सामान्य सरकारी सेवा गरेर बस्यो। तर, फरक यत्ति कि नेपालको सरकारी सेवामा रहेकोको छोंटो समयमैं अकूत कमाऊन सफल भयो भने जिन्दगीभर बिदेशको गुलाम गर्नेले अन्त्यमा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रह्यो।
हाम्रै छिमेकी देश भारतका सिमावर्ती प्रदेशहरु युपी, बिहारलगायतका नागरिक पनि नेपाली नागरिकझैं हातमा पासपोर्ट बोकेर बिदेशिन्छन। फरक यत्ति छ, उनीहरुले बिदेशिएको १/२ बर्षमैं घरजग्गा जोडिसकेका हुन्छन। अझ अलिक राम्रै कमाऊनेले त हैशियतअनुसारको गाडी चढेर हिंड्ने स्थानमा पुग्दछन भने यता नेपाली नागरिक जिन्दगीभर बिदेशमा पसिना बगाएर पनि न यौटा गतिलो घर जोड्न सक्तछन, न नै आफ्ना सपनाहरु पूरा गर्न सक्तछन।
चर्को कर शुल्क र रेमिट्यान्सले मात्र धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जम्मा ५.१ प्रतिशतमात्र रहेको छ भने कृषिक्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। बाँंकी सबै रेमिट्यान्स र चर्को करले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ।
भारतमा यौटा सामान्य घर बनाऊन ३ लाखले पुग्दछ भने नेपालमा ५० लाख भन्दा कमिमा यौटा घर बनाऊन सकिँदैन। ३-५ लाखमा आरामदायी गाडी भारतमा चढ्न सकिन्छ भने नेपालमा सोहि गाडीको मूल्य २५-३५ लाखसम्म पर्न आऊँदछ।
सरकारले गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, शतप्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १० प्रतिशतसम्म सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन्छ । उदाहरणको लागि भारतमा २० लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा कार नेपाल आएर ग्राहकले खरिद गर्दासम्म उक्त कारको मूल्य ८५ लाख कटिसकेको हुन्छ।
सरकारले यौटै गाडिमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत, अर्थात १६ लाख लिंदा भन्सार शुल्कपछि गाडीको मूल्य ३६ लाख रुपैयाँमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसपछि आऊँछ अन्तःशुल्क ९० प्रतिशतले। ३६ लाखमा ९० प्रतिशतको अन्त: शुल्क ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुनजान्छ। यहाँसम्म आईपुग्दा गाडीको मूल्य ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको हुन्छ।
सरकारको लूटको शृङ्खला यतिमा मात्र रोकिंदैन, ६८ लाख पुगेको उक्त गाडीमा फेरि १० प्रतिशत सडक दस्तुर जोडेर गाडीको मूल्य करिब साढे ७५ लाख कटाईसकिएको हुन्छ। अब आयो भ्याटको कुरा। भ्याट १३ प्रतिशत । भ्याटपछि गाडीको मूल्य ८५ लाख।
भारतमा ने रू २० लाख पर्ने यौटै कारमा सरकारले विभिन्न बाहानामा ६५ लाखसम्म राजस्व असूल गर्दछ। यसको अर्थ २५० प्रतिशत कर भन्ने बुझिन्छ।
यो त भयो सरकारले बिलाशीको साधनको रुपमा लिएको सवारी साधनको कुरा। सरकारले सडक दस्तुर भनेर सवारी साधनमा चर्को कर लिएर के गर्नु? बिगत ३० बर्षदेखि यौटा नया गुणस्तरीय सडक थपिएको छैन। भएका सडक गुणस्तरीय बनाईएका छैनन। सडक झन खन्जर बन्दै गएका छन। खन्जर सडकमा सवारी साधन चलाऊँदा जस्तोसुकै सवारी साधन पनि एक बर्ष नबित्दै सडकजस्तै खन्जर नै बनेर गएका छन। तिनको मर्मत गर्दा उत्तिकै लागत लाग्दछ। नेपालमा सार्वजनिक सवारीमा भाढा महंगो हुनुको यौटा कारण यो पनि हो।
सवारी साधनको मात्र के कुरा? निर्माणसामाग्री देखि लिएर दैनिक भान्सामा उपभोग्य बस्तुमा समेत नेपाल सरकारले चर्को कर लगाऊँदै आएको छ।
“भ्रष्टाचार मौलायो मौलाएन लोकतन्त्र”
यस्तोसम्म हुन्छ भ्रष्टाचारको सेटिङ्ग
घर बनाऊन महंगो पर्नुको कारण सरकारले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने कच्चा पदार्थामा विभिन्न बाहानामा असुल्दै आएको चर्को करको कारण नै हो। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको लागि चुनढुंगा उत्खननबाहेक अन्य कुनैपनि कच्चापदार्थको उत्खनन हुन सकिराखेको छैन। सियो देखि कलमसम्म, हलो देखि हाईड्रोसम्मका लागि चाहिने सबै कच्चा पदार्थमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जसमा भारतीय बजारको निर्भरता हिस्सा ६५ प्रतिशत हुन आऊँछ।
हरेक सरकार – जनतामारा सरकार !
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीयताका सबै सरकार जनतामारा सरकार नै हुन। कुनैपनि सरकारले जनताको भलोको लागी जनपक्षीय काम गर्न सकेनन। अझ उदेकलाग्दो त के भने हरेक सरकारले हरेक बर्ष नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आएता पनि नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य बस्तुहरुले बजार मूल्य नपाएर हरेक बर्ष सडकमा फालिदै र गाडिदै आए, उता भने नेपाल- भारत नाकाबाट दिनका दिन कयौं ट्रक बिषादीयुक्त तरकारी बोकेर नेपाल छिरिरहे। जुनसुकै पार्टि र ब्याक्तिले नेतृत्त्व गरेको सरकार होस- भारतीय एजेन्टसामु झुकी नै रहे।
इन्धनको मूल्यबृद्धिको सोझो अर्थ हो – महंगी। यत्रतत्र सर्वत्र महंगी। बढेको इन्धन गाडीमा राखेर कसैले सस्तोमा ढुवानी त गर्दैन। यात्रु त बोक्दैन। ढुवानी महंगो पर्नुको अर्थ हो – भान्सासम्मै महंगीको तरवार तेर्सिनु।
अब त काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन।
कुनै पनि कम्पनीले आफूले आर्जेको मुनाफाबाट आफ्नो कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र उनीहरुको उत्पादकत्व अझ वृद्धि गर्नका लागि बोनस बाँढ्ने भन्दै गर्दा त्यसमा कसैको आपत्ति नहुनुपर्ने हो।
तर, नेपाल आयल निगमको मामिलामा भने सरकार र निगमले कसरी बजारमा जबर्जस्ती एकाधिकार कायम गरेर र जनतालाई महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर यति ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउन सफल भयो, र त्यसरी कमाएको नाफा भोलिको दिनमा आउन सक्ने जोखिम टार्नका लागि भनेर संचित गरेर राख्नुको सट्टा कर्मचारीहरुले कसरी बोनस लिन पाउँछन् भन्ने सबैको जायज प्रश्न हो।
हामीले अथाह बिश्वास र भरोसाका साथ जुन जुन नेतालाई संसद हुँदै सत्ताको खुड्किलो चढायौं, तिनै नेताबाट जनतामाथी बारम्बार धोका र बेईमानीसिवाय सकारात्मक संदेशको खबर कहिल्ल्यै अनुभव गर्न पाएनौं। जुन सरकार आए सोझै जनता मारेर गए। जुन नेताले पनि जनतामाथी घृणित राजनीति गएरै गए। जनता सधैको जहिं तहिं।
जनता चुस्न र ठग्न मात्र पल्किएको नेपाल आयल